Maungtintyin: စီးပွါးရေးရှု့ထောင့်အပေါ် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အမြင် သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ဘောဂသုခ
စီးပွါးရေးရှု့ထောင့်အပေါ် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အမြင် သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ဘောဂသုခ
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဒေသနာတော်များသည် အနာဂတ်ပြန်လည်မွေးဖွါးမှုအတွက် လက်ရှိပျော်ရွှင်မှုကို အချိန်ရွှေ့ဆိုင်းထားမည်ဖြစ်သော ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဆင်ခြင်စဉ်းစားမှုအပေါ်မှာသာလျင် အခြေခံထားသည်။ အသက်ရှင်နေထိုင်စဉ်အတွင်း သူတို့၏ဘ၀ကို အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်မှုမရအောင် ဘ၀၏ဆိုးပြစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အဆက်မပြတ် တနှုန်းနှုန်းစဉ်းစားနေရန် သူ၏နောက်လိုက်များကို မျော်လင့်ထားသည်။ ဤကဲ့သို့ အချို့သူများက ယုံကြည်ကြ၏။
သုခ-ဆိုတာက ချမ်းသာခြင်းပါ။ လူတိုင်းချီတက်နေတာက အဲဒီ သုခ-ဆိုတဲ့အရာကို ရရှိဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသုခ ဆိုတဲ့ ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ အယူအဆကလည်း အမျိုးမျိုးပါ။
ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုကသာ စိတ်ချမ်းသာမှုကို ဖြစ်စေနိုင်တယ်-လို့ အချို့က ယူဆပါတယ်။
စိတ်ချမ်းသာမှုမှာ ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ သက်ဆိုင်မှု မရှိဘူး-လို့ ယူဆသူလည်း အများသားပါ။
ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှုဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အထောက် အကူပြုနေတယ်-လို့ သုံးသပ်ပြောဆိုမှုများလည်း ရှိနေတာပါ။
ကျမ်းဂန်များမှာ တွေ့ရတာကတော့ သုခအမျိုးအစားက တော်တော်များပါတယ်။ အဲဒီများစွာထဲကမှ ဒီနေရာမှာ လောကုတ္တရာဘောင်ထဲက လက်လှမ်းမမီတဲ့ သုခတွေကို မပြောဘဲ သာမန်လူတို့နှင့်သက်ဆိုင်တဲ့ သုခ၊ ဒါမှ မဟုတ် ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာ သုခ၊ တစ်နည်းအားဖြင့်တော့ လောကီဆိုင်ရာသုခများကိုပဲ ပြောကြည့်ချင်ပါတယ်။
အဲဒီသုခများကိုတော့ ဂိဟိသုခ၊ ကာမသုခ၊ ဥပဓိသုခ၊ သာသ၀သုခ၊ သာမိသသုခ၊ အနရိယသုခ၊ ကာယိကသုခ၊ သာတသုခ - ရယ်လို့ အမည်အမျိုးမျိုးဖြင့် တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကာမဂုဏ်ကို အကြောင်းပြု၍ဖြစ်တဲ့ ချမ်းသာ - ကာမသုခ၊ လောကမှာ အကျုံးဝင်တဲ့ချမ်းသာ - ဥပဓိသုခ၊ ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ ချမ်းသာ အနရိယသုခ၊ ကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ ချမ်းသာ ကာယိကသုခ၊ သာယာအပ်သောသဘောရှိတဲ့ ချမ်းသာ သာတသုခ-စသဖြင့် ခေါ်ပါတယ်။ ဒါတွေ အားလုံးဟာ သာမန်လူသားတွေနဲ့ စပ်ဆက်နေတဲ့ချမ်းသာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူသူကိုယ်ကိုယ် လိုလားတောင့်တနေတဲ့အရာတွေဆိုယင်လည်း မှားမယ်မဟုတ်ပါ။
လိုချင်တယ်၊ ဆာလောင်မွတ်သိပ်တယ်၊ အိုမင်းတယ်-ဆိုတာကို ရောဂါလို့ ဆိုပါတယ်။ ကမ္ဘာဦးလူသားတွေမှာ အဲဒီရောဂါသုံးမျိုးပဲ ရှိခဲ့တယ်လို့ ကျမ်းဂန်များက ပြောပါတယ်။ ဒီတော့ လိုချင်တဲ့ ရောဂါဟာ ကမ္ဘာဦးအစကတည်းက ပါလာတာဖြစ်တော့ သူသူကိုယ်ကိုယ် လိုချင်တောင့်တကြတာဟာ ထူးထူးဆန်းဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူသားတစ်ယောက်အဖြစ် ပေါက်ဖွားလာကတည်းက ပါလာတာကလည်း ဒီလိုချင်တောင့်တမှုဆိုတဲ့ အရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လောကမှာ အလိုရှိအပ် နှစ်သက်အပ် မြတ်နိုးအပ် ခဲယဉ်းသဖြင့် ရအပ်တဲ့အရာတွေက များစွာပါ။ အဲဒီများစွာထဲမှာ ဒီလေးမျိုးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
(၁) တရားနဲ့ လျော်ညီစွာ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကို ရရှိချင်ကြတယ်။
(၂) အဲဒီလို တရားနဲ့အညီ စည်းစိမ်တွေရပြီးတဲ့အခါမှာ ဆွေမျိုး မိတ်သင်္ဂဟဖြစ်တဲ့ အခြံအရံတွေကို ရောက်လာစေလိုကြတယ်။
(၃) စည်းစိမ်တွေလည်းရ အခြံအရံတွေလည်း ပြည့်စုံတဲ့အခါ အသက်ရှည်ချင်လာကြတယ်။
(၄) အဲဒီသုံးခုပြည့်စုံယုံတင်မကဘူး သေလွန်တဲ့အခါမှာလည်း ကောင်းတဲ့ဘုံဘ၀ကို ရောက်လိုကြပြန်ပါတယ်။
တရားနဲ့လျော်ညီစွာ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကို ဖြစ်စေချင်ကြတယ်-ဆိုတာနဲ့စပ်ဆက်လို့ “ ကြီးကျယ်တဲ့ စီးပွါးရေး အောင်မြင်မှုတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ မလွတ်ကင်းတဲ့ ဥပဒေတစ်ခု ရှိစမြဲ” ဆိုတဲ့ စကားပါ။ ဒီစကားအရ တရားနဲ့လျော်ညီဖို့ဆိုရာမှာ စီးပွါးရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့ အောင်မြင်သူစီးပွါးရေးသမားများသာ နားလည်နိုင်မယ့်အရာ ဖြစ်မှာပါ။
ဆိုခဲ့ပြီးတဲ့စကားများအရ လူသားတွေတောင့်တလိုချင်ကြတဲ့အရာထဲမှာ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဟာ အရေးပါနေတယ်ဆိုတာပါ။ မရသေးတဲ့စည်းစိမ်တွေ ရရှိစေပြီး ရပြီးသားတွေကို တိုးပွါးစေနိုင်မဲ့ အောင်မြင်တဲ့ စီးပွါးရေးရှင် တစ်ယောက်အဖြစ် ပြည့်စုံရမယ့်အချက်များကို ဒီလို့ ပြဆိုထားပါတယ်။ ဘာတွေလဲဆိုယင်တော့
(၁) နံနက် အခါမှာ ရောင်းဝယ်မှုအလုပ်ကို ရိုရိုသေသေ စီရင်ပြုလုပ်ရပါ့မယ်။
(၂) နေ့လယ်အခါမှာ ရောင်းဝယ်မှု အလုပ်ကို ရိုရိုသေသေ စီရင်ပြုလုပ်ရပါ့မယ်။
(၃) ညချမ်းအခါမှာလည်း ရောင်းဝယ်မှုအလုပ်ကို ရိုရိုသေသေ စီရင်ပြု လုပ်ရပါ့မယ်။
ဒီအလိုအရ စီးပွါးရေးအောင်မြင်လိုသူဟာ နံနက်, နေ့, ည အချိန်ပြည့် စီးပွါးရေးအပေါ်မှာပဲ အာရုံကို စူးစိုက်ထားပါလို့ မိန့်ဆိုထားခြင်းပါ။ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာက အမြဲတမ်း တက်ကြွနေဖို့လိုအပ်သလို အလုပ်ကိုလည်း ရိုသေလေးစားပါလို့ ပြောနေပါတယ်။ ပျင်းရိခြင်း၊ မေ့လျော့ခြင်း၊ ၀ီရိယမရှိခြင်း၊ မစောင့်စည်းခြင့်၊ အအိပ်ကြူးခြင်း၊ မပျော်မွေ့ ခြင်း-ဆိုတဲ့ စီးပွါးဥစ္စာမတည်ကြောင်း ၆-ခုထဲက အလုပ်မှာ မပျော်မွေ့သူ ပါဝင်နေတော့ သူ့ရဲ့အပြန်အာဖြင့် အလုပ်မှာပျော်မွေ့နေဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာပါ။
အဲဒါအပြင် ဒါတွေနဲ့ ပြည့်စုံမယ်ဆိုယင်တော့ မကြာမီမှာပဲ စည်းစိမ်တွေ များပြားခြင်းသို့ ရောက်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
(၂) ညဏ်နှင့်ယှဉ်တဲ့ ၀ီရိယထူးရှိခြင်း၊
(၃) အမှီကောင်းနှင့် ပြည့်စုံခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ မျက်စိအမြင်ရှိခြင်း-ဆိုတာကတော့ “ ပစ္စည်းကို ၀ယ်ပြီး ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုယင် အရင်းအနှီးကတော့ ဘယ်လောက်ကုန်နိုင်တယ်။ အမြတ်အစွန်းက ဘယ်လောက် ပြန်ရနိုင်တယ်” အဲသလို တွက်ချက်နားလည်ထားခြင်းပါ။ ညဏ်နှင့်ယှဉ်တဲ့ ၀ိရီယထူးရှိခြင်း-ဆိုတာကတော့-“ပစ္စည်းကို ၀ယ်ရာမှာဖြစ်စေ၊ ရောင်းရာမှာ ဖြစ်စေ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာပါးနပ်တယ်” အဲသလို အရောင်းအ၀ယ် ကျွမ်းကျင်ထားခြင်းပါ။ အမှီကောင်းနဲ့ ပြည့်စုံခြင်း-ဆိုတာကတော့ ဒီလိုပါ။ အခြား စီးပွါးရှင် သူဌေးသူကြွယ်ကုန်သည်တွေက-“ စီးပွါးရေးကို လုပ်နေတဲ့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မျက်စိအမြင်လည်းရှိတယ်၊ ညဏ်နှင့်ယှဉ်တဲ့ ၀ီရိယထူးလည်း ရှိတယ်၊ ဇနီးမယား သားသမီးများကို လုပ်ကိုင်ကျွေးမွေး ပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်တယ်၊ ငါတို့ကိုလည်း ရံခါရံခါ အတိုး ပေးဆပ်ဖို့လည်း စွမ်းနိုင်တယ်” လို့ ယုံကြည့်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့က“ မိတ်ဆွေ! ငါတို့ဆီက ဒီကုန်ပစ္စည်းတွေကို ယူပြီး ဇနီးမယား သမီးသားတို့အား ပြုစုလုပ်ကျွေးစောင့်ရှောက်ပါ၊ ငါတို့ကိုလည်း ရံခါရံခါ အတိုးကို ပေးဆပ်ပါ” လို့ ကုန်ပစ္စည်းများဖြင့် ဖိတ်ကြားကြပါတယ်။ ဒါကတော့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိမှုအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ယုံကြည်မှုရှိလို့ တစ်ဖက်စီးပွါးရှင်က သူထံမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားခြင်းပါ။
ဒီတော့ တစ်နံပါတ်က အရင်းအနှီးနဲ့အမြတ်အစွန်းကို တွက်ချက်နားလည်ထားခြင်းပါ။ နံပါတ်နှစ်က အရောင်းအ၀ယ်မှာ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာပါးနပ်ဖို့ကို ပြောတာပါ။ သုံးနံပါတ်က စီးပွါးရေးကိုလုပ်မယ့်သူက အခြားသူတစ်ပါးအား မိမိရဲ့စွမ်းရည်ကို ယုံကြည်လာအောင် ဆွဲဆောင်ထားနိုင်ခြင်းပါ။
ဖော်ပြခဲ့တဲ့အချက်တွေကတော့ ဥစ္စာပစ္စည်းတိုးပွါးဖို့အတွက် ညွန်ပြထားတဲ့ စီးပွါးရေးလုပ်နည်းကိုင်နည်းများပါ။ အဲဒီလို့ စီးပွါးရေးတွေ ရှာဖွေလုပ်ကိုင်ကြရာမှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ရည်ရွယ်ချက် ကွဲပြားသွားပြန်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ တစ်ဖက်မြင်သူဆိုတာက မရသေးတဲ့စည်းစိမ်ကို ရရှိအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်။ ရပြီးသားစည်းစိမ်တွေကိုလည်း တိုးပွါးများပြားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ မျက်စိရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုသိုလ် အကုသိုလ်၊ အပြစ်ရှိ မရှိ၊ အယုတ် အမြတ်၊ အဖြူ အမဲဆိုတာကိုတော့ မြင်နိုင်တဲ့မျက်စိ မရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သူက စည်းစိမ်းဥစ္စာကို ရမယ်ဆိုလျင် တရားခြင်း မတရားခြင်းစသည်တို့ကို မကြည့်တော့ပါဘူး။ စုဆောင်းဖို့ကိုပဲ စိတ်ဝင်စားသလို ရှာဖွေမှုမှာလည်း ကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ ရှာဖွေလုပ်ကိုင်ခြင်းများဟာလဲ ကာမဂုဏ်ကို အပြည့်အ၀ခံစားဖို့ပဲ ရည်စူးပြီး လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ ဒါကိုပဲ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ဗဟိုပြုထားပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို မြှင့်တင်ဖို့ စိတ်မ၀င်စားသူလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ လုံးဝကန်းသူဆိုတာကတော့ ရုပ်ပိုင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းဥစ္စာကို ရှာဖွေနိုင်စွမ်း မရှိသလို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ဘယ်လို မြှင့်တင်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်း နားမလည်သူပါ။ သူ့အတွက် ကာမဂုဏ်သုခရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို ဖွင့်ဆိုနိုင်စွမ်းမရှိသလို မြင့်မြတ်တဲ့အရာတွေကိုလည်း ထိတွေ့ခွင့်မရရှာပါဘူး။ နှစ်ဖက်မြင်သူဆိုတာကတော့ လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာကို ရယူနိုင်စွမ်းရှိသလို စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မြှင့်တင်ထားနိုင်စွမ်းရှိသူ ဒါမှမဟုတ် မြင့်မြတ်တဲ့အရာတွေကို သူ့နဲ့အတူလက်တွဲ ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သူပါ။ ဒါကိုပဲ ဘာသာတရားနယ်ပယ်ကစကားနဲ့ ပြောမယ်ဆိုယင်တော့ ပစ္စုပ္ပန် သံသရာ အကျိုးစီးပွါးကို နားလည်ကျင့်သုံးနေတယ်လို့ ဆိုတာပါ။
ဒီနေရာမှာ ဆက်လက်ပြောချင်တာက ရရှိပြီးဖြစ်တဲ့ စီးပွါးဥစ္စာကို နောက်ထပ်တိုးပွါးဖို့နဲ့ တည်တံ့နေဖို့ဆိုတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပိုင်းကိုပါ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသည်ဆိုရာမှာ အချို့က ရေ-မီး-မင်း-ခိုးသူ-ကြွေးမြီ-ငတ်မွတ်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာယင် အချိန်မရွေး ထုတ်သုံးနိုင်ဖို့အတွက် ရှေးခေတ်က မြေကြီးထဲမှာ မြုပ်နှံကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်မချရပါဘူး။ အဲဒီ မြှုပ်ထားတဲ့နေရာက ရွေ့ ရှားသွားတတ်ပါတယ်။ မြှုပ်ထားတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်း မေ့လျော့နေနိုင်ပါတယ်။ နဂါးတွေက နေရာပြောင်းတတ်သလို ဘီလူးတွေက ယူထားတတ်ပါတယ်။ မချစ်အပ်တဲ့ အမွေခံတွေက တူးဖော်ထုတ်ဆောင်တတ်ပါတယ်။ ကုသိုလ်ကံကုန်တဲ့အခါမှာ အဲဒါတွေ အလိုလို ကုန်ဆုံးသွားနိုင်တယ်-လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ ကုသိုလ်ကံတို့ နဂါးတို့ ဘီလူးတို့ဆိုတဲ့ မမြင်နိုင်တာတွေကို ချန်ထားလို့ အခြားအရာတွေကတော့ ငြင်းကွယ်စရာမရှိတဲ့ အချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းကိုတော့ မျက်မှောက်ခေတ်မှာ ကျင့်သုံးသူ နည်းပါးသွားပြီဟု ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီမြေကြီးထဲမြှုပ်နှံခြင်းအစား မီးခံသေတ္တာများ၊ ဘဏ်များနှင့် အာမခံကုမ္မဏီများက အစားထိုးနေရာဝင်ယူသလားဆိုတာကတော့ စဉ်းစားစရာပါ။
ဒါ့အပြင် နောက်ထပ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတာကတော့
(၁)လယ်-ယာ-မြေ-ဥယျာဉ် စသဖြင့် ရွှေ့ ပြောင်းလို့မရတဲ့ အရာတွေပေါ်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားခြင်း ထာဝရဥစ္စာ၊
(၂) ကျွဲး-နွား-ဆင်း-မြင်း စသဖြင့် ရွှေ့ ပြောင်းလို့ရတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားခြင်း ဇင်္ဂမဥစ္စာ၊
(၃) ရွှေ-ငွေ-ကျောက်သံ ပတ္တမြား စသဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားခြင်း သံဟာရိမဥစ္စာ၊
(၄)သိပ္ပံပညာ-၀ိဇ္ဇာပညာ-နည်းပညာ၊ စသဖြင့် အသိပညာ-အတတ်ပညာအပေါ်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားခြင်း အင်္ဂသမဥစ္စာ-တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ (၅)ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကတော့ အနုဂါမိကဥစ္စာလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီမှာလည်း အနုဂါမိကဥစ္စာကို ခနဘေးချထားကြပါစို့။ မြှုပ်နှံမှုလေးမျိုးဖြစ်တဲ့ ထာဝရ၊ ဇင်္ဂမ၊ သံဟာရိက၊ အင်္ဂသမ -ဆိုတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဟာ ယနေ့တိုင် ကျင့်သုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာလဲ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့ ထာဝရ၊ ဇင်္ဂမ၊ သံဟာရိက-ဆိုတဲ့အရာတွေဟာ အသိပညာ အတတ်ပညာကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြစ်တဲ့ အင်္ဂသမဥစ္စာနဲ့ ကင်းလို့မရဘူးဆိုတာပါ။ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားခြင်းသည်ပင် အခြား ထာဝရ-ဇင်္ဂမ-သံဟာရိက-တို့ကိုလည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးသား ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသင်္ဂမဥစ္စာဖြစ်တဲ့ အသိပညာ အတတ်ပညာများကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ လူမျိုးများ၊ နိုင်ငံများသာ ယနေ့မျက်မှောက်မှာ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းလူမျိုး၊ ထိပ်တန်းနိုင်ငံများအဖြစ် ရပ်တည်နေတယ်ဆိုတာ သိမြင်ပြီး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ဆက်လက်ဖော်ပြမဲ့အပိုင်းက ရလာတဲ့ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကို သုံးဆောင်ခံစားမှုအပိုင်းပါ။ ရရှိလာတဲ့ ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကို သုံးဆောင်ခံစားခြင်းဖြင့် သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ ပြုနိုင်တဲ့အချက်တွေ ဒါမှမဟုတ် အကျိုးရလဒ်တွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ရှာဖွေလို့ရရှိခဲ့တဲ့ စည်းစိမ်တို့ဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုယ် ချမ်းသာစေပါတယ်။ နှစ်သက်စေပါတယ်။ ချမ်းသာကို ကောင်းစွာဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ အဲသလိုပါပဲ မိမိနဲ့စပ်ဆက်နေတဲ့ အမိ အဖ၊ သားသမီး၊ ဇနီးမယား၊ ဆွေမျိုး၊ အလုပ်သမား-တွေကိုလည်း ချမ်းသာစေပါတယ်။ နှစ်သက်စေပါတယ်။ ချမ်းသာကို ကောင်းစွာဆောင်နိုင်စေပါတယ်။
တကယ်တော့ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ စည်းစိမ်ဥစ္စာပြည့်စုံမှုဟာ ကိုယ်နဲ့စပ်ဆက်နေတဲ့ အခြားသူတွေကို အထောက်အကူပြုနေသလို အခြားစပ်ဆက်သူများကလည်း ကိုယ့်ကို ပြန်လည်လို့ အထောက်အကူ ပြုနေပါတယ်။ အထောက်အကူပြုခြင်းများစွာထဲက ဒီနေရာမှာ ဇနီးမယားရဲ့ အရေးပါမှုကို ပြောကြည့်ချင်ပါတယ်။ ဘဏ္ဍာတို့တွင် မိန်းမဘဏ္ဍာသည် အမြတ်ဆုံးလို့ ဆိုထားတဲ့အတွက် ချစ်သော ယုံကြည်ရသော ဇနီးတစ်ယောက်ရှိခြင်းဟာ မင်္ဂလာတစ်ပါးလို့ ယူဆရမှာပါ။ ဒါနဲ့စပ်ဆက်လို့ “ All great people have had women behind their successes. ကြီးကျယ်ထင်ရှားတဲ့လူများရဲ့ အောင်မြင်မှုနောက်ကွယ်မှာ ဇနီးမယားရှိတယ်” ဆိုတဲ့ စကားပါ။
နောက်တစ်ခုက ပြည့်စုံတဲ့စီးပွါးရှင်တစ်ယောက်ဟာ ကုန်ခမ်းသွားခြင်းများစွာထဲက စီးပွါးဥစ္စာတွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ကုန်ခမ်းစေမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းပါ။ အဆွေအမျိုးများကို ပေးကမ်းရပါမယ့်။ ဧည့်သည်တို့ကို ပေးကမ်းရပါ့မယ်။ သေလွန်ပြီးတဲ့ အဆွေအမျိုးတွေအတွက် ရည်စူးပြီး ပေးလှုပူဇော်ရပါ့မယ်။ အာဏာပိုင်ဆိုင်သူများ၊ တနည်းအားဖြင့်တော့ မင်းအားပူဇော်ရပါ့မယ်။ နတ်တွေကိုလည်း ခြွင်းချန်ထားလို့ မရဘူးဆိုတာပါ။ အဲသလိုပါပဲ မြင့်မြတ်တဲ့ သမဏဗြဟ္မဏတွေကို လှုဒါန်းခြင်း ပြုလုပ်ကြရပါ့မယ်။ ဒီသုံးစွဲခြင်းမျာကိုတော့ သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ သုံးဆောင်ခံစားနည်း၊ တစ်နည်းအားဖြင့် နည်းမှန်လမ်းမှန် ကုန်ခမ်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက- ရေ၊ မီး၊ မင်း၊ ခိုးသူ၊ အမွေခံဆိုးတို့ရဲ့ ကျရောက်လာမည့်ဘေးတို့မှ ထက်ဝန်းကျင် ပိတ်ဆို့ပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါဟာကို သင့်လျော်တဲ့သုံးဆောင်မှုလို့ ဆိုပါတယ်။
အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ သုခများစွာထဲက ဆင့်ပွါးခွဲထွက်လာတဲ့ သုခတွေကတော့ - အတ္ထိသုခ၊ ဘောဂသုခ၊ အာနဏျသုခ၊ အန၀ဇ္ဇသုခ-တို့ပါ။
(၁)သင့်လျော်တဲ့အချိန်အခါမှာ တရားသဖြင့် ကြိုးစားအားထုတ်ပြီး ရရှိလာတဲ့ စည်းစိမ်တွေရှိလို့ ချမ်းသာမှု ၀မ်းမြောက်မှုရတာက အတ္ထိသုခပါ။
(၂)တရားသဖြင့် ရှာဖွေရရှိလာတဲ့ စည်းစိမ်တွေကို သုံးဆောင်ခံစားနိုင်၊ ကောင်းမှုကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်လို့ ချမ်းသာမှု ၀မ်းမြောက်မှုရတာက ဘောဂသုခပါ။
(၃)နည်းသည်ဖြစ်စေ များသည်ဖြစ်စေ ကြွေးမြီများကို တစ်ဦးတစ်ယောက်အား ပေးဆပ်စရာမလိုအပ်လို့ ချမ်းသာမှု ၀မ်းမြောက်မှုရတာက အာနဏျသုခပါ။
(၄)အန၀ဇ္ဇသုခ -ဆိုတာကတော့ အပြစ်မရှိတဲ့ ကာယကံ ၀စီကံ မနောကံတွေနဲ့ ပြည့်စုံနေတဲ့အတွက် ချမ်းသာမှု ၀မ်းမြောက်မှုရနေတာကို ဆိုပါတယ်။
ဒါကိုပဲ ရှိမှုချမ်းသာ- အတ္ထိသုခ၊ သုံးဆောင်မှု ချမ်းသာ- ဘောဂသုခ၊ ကြွေးမြီမရှိမှု ချမ်းသာ- အာနဏျသုခ၊ အပြစ်မရှိမှုချမ်းသာ- အန၀ဇ္ဇသုခ-လို့ ဆိုရမှာပါ။
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ဘ၀တစ်ခုဆိုတာက ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ပိုင်ဆိုင်တာတွေကို ခံစားသုံးဆောင်ခြင်း၊ သုံးဆောင်တတ်ခြင်းဟာလည်း ပျော်ရွှင်မှုကို ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာပါ။ ဒီနေရာမှာ သုံးဆောင်မှုချမ်းသာအပိုင်းကို နောက်ထပ်ဆင့်ပွါးလို့ ချဲ့ကားကြည့်ချင်ပါတယ်။
ယနေ့မျက်မှောက်ကမ္ဘာမှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အသက်ရှင်နေထိုင်ကြစဉ် အကြီးမားဆုံး ခြိမ်းခြောက်မှုဟာ တစ်ဦးချင်းအလိုက် နိုင်ငံအလိုက် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကြမ်းဖက်ဝါဒ ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အကြောင်းရင်း ဇစ်မြစ်များကို စုံစမ်းမှုအရ အခြားသူများက အုပ်စုတစ်စုကိုဖြစ်စေ လူမျိုးတစ်ခုကိုဖြစ်စေ ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် အခြားလူမျိုးတစ်ခုကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်း၊ သိမ်းသွင်းဆွဲဆောင်ခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ် အခြားအုပ်စုတစ်ခုက လူမျိုးစုတစ်ခု အုပ်စုတစ်စု၏နယ်မြေကို ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ခြင်းဟာ အဓိကအကြောင်း အချက်ဖြစ်တယ်-လို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ မျက်မှောက်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဟာ များစွာကြွယ်ဝချမ်းသာသော ဘ၀တူ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ညီနောင်များက ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အားနည်းတဲ့ အဖွဲ့အစည်းများကို အမြတ်ထုတ်ရန် အရင်းရှင်ဝါဒ၏ အမြင့်မားဆုံးတိုးတက်မှု၏ အထူးပြုပုံစံတစ်ခု ဖြစ်တယ်-လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒီအဆိုအရ လူသားတွေဟာ ရရှိဖို့ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ခံစားသုံးဆောင်ဖို့အတွက် အပြေးအလွှားရှာနေပါတယ်။
ခံစားသုံးဆောင်မှုအပိုင်းမှာတော့ သုခအမျိုးမျိုးကို ဖွင့်ဆိုနိုင်တဲ့အတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုအတွက် ဦးတည်းမလား စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက် ရည်စူးမလား ဒါမှမဟုတ် ဘာသာရေးပိုင်းဆိုင်ရာကို ဦးတည်းမလားဆိုတာပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့်တော့ တစ်ဖက်ကန်းဆိုတဲ့ ကာမဂုဏ်ချမ်းသာမှုကိုပဲ လုံးဝဦးတည်မလား နှစ်ဖက်မြင်ဆိုတဲ့ ကာမဂုဏ်ချမ်သားကော မြင့်မြတ်တဲ့အရာတွေကော ပြုလုပ်မလား ဆိုတာပါ။ ခပ်မြင့်မြင့်ပြောကြည့်ယင်တော့ လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၊ ဆိုင်တစ်ဆိုင်နဲ့တစ်ဆိုင်၊ ကုမ္မဏီတစ်ခုနဲ့တစ်ခု၊ နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဘယ်လိုခွဲဝေသုံးဆောင်မလဲ ဆိုတာပါ။
ဒီတော့ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာတော်များဟာ အနာဂတ်ပြန်လည်မွေးဖွါးမှုအတွက် လက်ရှိပျော်ရွှင်မှုကို အချိန်ရွှေ့ဆိုင်းထားတဲ့ ဘာသာရေးဆိုတာရယ်၊ အသက်ရှင်နေထိုင်စဉ်အတွင်း သူတို့၏ဘ၀ကို အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်မှုမရအောင် ဘ၀၏ဆိုးပြစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အဆက်မပြတ် တနှုန်းနှုန်းစဉ်းစားနေစေတယ်ဆိုတာရယ်-အဲဒါတွေကို အထက်ပါ သုခများက ဖြေရှင်းပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Monday, June 07, 2010